Whatsapp အုပ်စုများ What Whatsapp အုပ်စုများမှလူများနှင့်တွေ့ဆုံ
Login o မှတ်ပုံတင်
WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံး link site ဖြစ်သည် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဤနေရာတွင်သင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အကောင်းဆုံး WhatsApp အုပ်စုများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် link ကိုပို့ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ WhatsApp အုပ်စုကိုလည်းစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
ဒီလိုနည်းနဲ့လူအများကမင်းကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ နှင့်သင်အသစ်သောသင်တန်းသားများကိုရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသော join နိုင်ပါတယ် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ သင်ကြိုက်သလောက်၊ အကန့်အသတ်မရှိ, သင်ကြိုက်သလောက်များပြားသည့်အဖွဲ့များကိုပို့နိုင်သည်။
တစ်ဦးဖန်တီး WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ ကြည့်ရတာအရမ်းလွယ်ပြီးမြန်တယ်။
သင်၏ WhatsApp ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ခြေရှိ tab ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ စကားစမြည် .
ထို့နောက်ရှာဖွေရေးအကွက်အောက်ရှိ၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိကိုနှိပ်ပါ အုပ်စုအသစ် .
သူငယ်ချင်းများစာရင်းတွင်ကန ဦး အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သူများကိုရွေးချယ်ပြီးကိုနှိပ်ပါ အောက်ပါ .
ဖန်တီးမည့် WhatsApp အုပ်စု၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
နောက်ဆုံးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဖန်တီး .
သင်၏အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ- သင်၏အုပ်စုအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောနာမည်တစ်ခုစဉ်းစားပြီးအုပ်စုလိုက်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ခုရွေးပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ WhatsApp အဖွဲ့သို့လူများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေလိမ့်မည်။
WhatsApp ကိုဖွင့ ်၍ သင်ဖျက်လိုသောအဖွဲ့ကိုနှိပ်ပါ။
ပါ ၀ င်သူစာရင်းကိုဆွဲချပြီးပါဝင်သူအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်းစီဖျက်ပစ်ပါ။
မြင်ကွင်းအောက်သို့ဆွဲယူပြီးနှိပ်ပါ အဖွဲ့မှထွက်ခွာပါ .
နောက်ဆုံးတော့ ရောင်ခြည် ကိုနှိပ်ပါ အုပ်စုကိုဖျက်ပါ .
ထိပ္ဖ်ား: အုပ်စုမှမထွက်ခွာမီသင်ပါဝင်သူအားလုံးကို ဦး စွာဖယ်ရှားရမည်။ မဟုတ်ပါက၎င်းအဖွဲ့ကိုဖယ်ရှား။ မရပါ။ မည်သည့်ပါ ၀ င်သူမှပါအုပ်စု၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
WhatsApp အုပ်စုများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် (groupswhats.app) သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်အုပ်စုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေရမည်။ ယခုအချိန်တွင်သင်သည် application ၏သူ့ဟာသူအတွင်း WhatsApp အုပ်စုများကိုမရှာဖွေနိုင်ပါ။
WhatsApp Group နှင့်မည်သို့ပူးပေါင်းရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏မတူညီသောအမျိုးအစားများတွင်သင်ရိုက်ထည့်လိုသည့်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေပါ။
ဖွင့်လှစ်မည့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အဖွဲ့ထဲဝင်ပါ .
Whatsapp ကိုဖွင့ ်၍ သင်ထွက်ခွာလိုသောအဖွဲ့ကိုနှိပ်ပါ။
WhatsApp Group သို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲ။
Whatsapp ကိုဖွင့ ်၍ သင်တစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုထည့်သွင်းလိုသည့်အဖွဲ့ကိုနှိပ်ပါ။
ပါ ၀ င်သူစာရင်းသို့ဆွဲချပြီးကိုနှိပ်ပါ သင်တန်းသားများကိုထည့်ပါ .
နောက်ဆုံးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ပေါင်း အထက်ညာဘက်ထောင့်၌တည်၏။
သတိပြုရန်အချက်များ - သင်တန်းသားများကို WhatsApp အုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းရန်သင်သည်အဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ရမည်။
WhatsApp ကိုအုပ်စုလိုက်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်နှင့်အခြား ၃ ဦး ကိုတစ်ကြိမ်လျှင်လူ ၄ ယောက်အထိအုပ်စုလိုက်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုများသည်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖြစ်နိုင်သည်။ အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဖွင့်လှစ်သောစာရင်းထဲတွင်, လူ3အထိကိုရွေးချယ်ပါ။
လူဘယ်နှစ်ယောက် WhatsApp အုပ်စုတွင် fit နိုင်သလဲ
လောလောဆယ် WhatsApp အုပ်စုသည်လူ ၂၅၆ ယောက်အထိစွမ်းရည်ရှိသည်။ သို့သော်အစပိုင်းတွင်အုပ်စုတစ်စုလျှင်လူ ၁၀၀ သာခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအက်ပလီကေးရှင်းတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ WhatsApp သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏စွမ်းရည်ကို ၁၀၀ မှ ၂၅၆ အထိတိုးမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ WhatsApp အုပ်စုအတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
သင်၏ WhatsApp အုပ်စုအတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏အဖွဲ့ ၀ င်များအားသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုပေးနိုင်သည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုမှသင်အဖွဲ့၏ဖော်ပြချက်၊ လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အဖွဲ့၏ကြီးကြပ်သူများပင်လျှင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အုပ်စုတွင်ရှည်လျားသောဖော်ပြချက်ရေးစရာမလိုပါ။ page link နှင့် voila ကိုမျှဝေပါ။
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အုပ်စုစာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန် link ကိုဝင်ရောက်ပါ
Group link ကိုထည့်ပါ (ပုံနှင့်အုပ်စုအမည်အလိုလျောက်ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်)
နောက်ဆုံးတွင် Create page ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်၏ WhatsApp အုပ်စုစာမျက်နှာကိုဖန်တီးပြီး၎င်းကိုသင်၏အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။
အားကစားရုံ & ကြံ့ခိုင်ရေး
အနုပညာ & သမိုင်း
နောက်ဆုံး Whatsapp အဖွဲ့များ
သူငယ်ချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမလုပ်နိုင်တဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလား။ quarantine သည်သင့်အတွက်ပျင်းစရာကောင်းပါသလား။ မဟုတ်ပါ။
* ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်နည်းဥပဒေများနှင့် / သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်များ * ❌ * ခွင့်မပြုသော * ❌ * PORN LINKS, ...
Peruvians admitted ဝန်ခံခဲ့သည်
ပွင့်လင်း Cab တရားအားထုတ်ခြင်း
သူငယ်ချင်းများနှင့် boludear ဖွဲ့ပါ၊ [အီးမေးလျ protected], Bard ခွင့်ပြုခဲ့ဒါကြောင့်မလာကြဘူး ...
manaos ၏ Legion
Shelo Nabel Rous ကိုအကြံဥာဏ်ပေးပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်နာမည်Rocío Tapia ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်နိုင်ရန်သင်၏သံသယအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်ပါသည်။
စပိန်တွင်နေထိုင်သောတစ် ဦး တည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ !! (ရှေ့ဆက် +34)
စိတ်ကိုအကြီးအကျယ်သုံးပြီးချစ်စရာကောင်းသောစတစ်ကာများနှင့်ပူးပေါင်းရန်၊ စည်းကမ်းများကိုဖတ်ရန်နှင့်အရာအားလုံးသည်ကောင်းမွန်သော bbs ဖြစ်လိမ့်မည်
ပျော်စရာနှင့်သမျှသော shit ရှိသည်ဖို့မိန်းကလေးအုပ်စု
လှပပြီးလှပပြီးလှပပြီးလှပသောလူများအတွက်အုပ်စုတစု၊ anime သုံးချင်သူများနှင့်သူတို့စီးရီးအကြောင်းပြောဆိုလိုသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ...
x ကဲ့သို့သိမ်းဆည်းထားသော x သိမ်းဆည်းထားသည့်မှတ်ချက်မှတ်ချက် x မှတ်ချက်ဒိုင်းနမစ်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်
၎င်းသည်လူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး Acer သည်အုပ်စုတွင်နေထိုင်ပြီးကောင်းမွန်သော ၀ န်းကျင်နှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသည်
ရိုးသားတဲ့လိင်တူချစ်သူချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝတဲ့ PORN ဗီဒီယိုများနှင့် PRIBADO ကိုနှစ်သက်တယ်။ HEROTIC ဂိမ်းများ။ ဖြစ်နိုင်ရင် …
* 🎭• ＷＥＬＣＯＭＥ •🎥 * 🍿a * 🍿🎬ＣＩＮＥ🍿🎬ＣＩＮＥ * _⚠GroupRules⚠_ ~ _✅ခွင့်ပြုသည် ~ _ ~ ရုပ်ရှင်များကနေဂီတ ...
သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောမိတ်ဖွဲ့ရန်အုပ်စုတစ်စု - ၀ အသက် - ၁၃ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အကြားရှိမည်သူမျှ CP CP NO SPAM NO GORE
ကျွန်ုပ်တို့သည်စာလုံးပေါင်းအမှားများမရှိဘဲပရဒိသုတွင်နေထိုင်သော dystopian အုပ်စုဖြစ်သည်။ သူတို့ကဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည် ...
ဟယ်လို! ကောင်းသောနံနက်ခင်း၊ နေ့လည်ခင်း၊ ညနေပိုင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်ကိုသင်ဖတ်ရှုနေသနည်း။ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် ...
နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောဆိုရန်၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်နှင့်ပျော်စရာရှိရန်အတွက်အမျိုးသားရေးအဖွဲ့၊ အုပ်စုသို့ဖိတ်ခေါ်ပါ။ 😎
꧁ঔৣ☬✘ąɱїیԵѦ𝓓ᶜᴿᴬᶻᵞ✘☬ঔৣ꧂ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ချစ်ခြင်း၊ စတစ်ကာများ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊
ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများကိုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ထဲဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုတားမြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ပို့ပေးသောမည်သူမဆို ...
အသက် ၂၅ နှစ်ကျော်သူများအတွက်လူမှုရေးမငြိမ်မသက်မှုများ
esoteric ဗဟုသုတများ၊ ဘာသာရပ်များ၊ တာတို၊ ဂဏန်းသင်္ချာ၊
အိမ်မှမထွက်ဘဲအလုပ်လုပ်ပါ (Bogotá - ကိုလံဘီယာ🇨🇴)
ကျွန်ုပ်တို့သည်Bogotáမြို့တော်တွင်တည်ရှိပြီးစျေးကွက်တွင်နှစ် ၃၀ ရှိပြီးတရားဝင်ဖြစ်သည်။
name အမည်၊ အသက်၊ နိုင်ငံနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူတင်သွင်းပါ (နိုင်ငံနှင့်ရွေးချယ်လိုသောဓာတ်ပုံ) ။ people အခြေခံအားဖြင့်လူများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ...
༺T 卄乇 F 卂爪ĨĨㄥㄚ༻ ꧂
love ༺T 卄乇 F 卂爪ĨĨㄥㄚ༻ ꧂အုပ်စုလိုက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စတစ်ကာများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ တေးဂီတများ၊ တေးသီချင်းများနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုရှိစေမည့်အုပ်စု ...
မှတ်ချက် x မှတ်ချက်မှတ်ချက် x မှတ်ချက်သိမ်းပြီး x သိမ်းဆည်းပြီး
အားလုံးတ ဦး တည်းဖျော်ဖြေရေးအတွက်
ဤအုပ်စုသည်အရသာနှင့်ဝါသနာများကိုမျှဝေရန်ဖြစ်သည်၊ anime၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ အနုပညာ၊
ထိတ်လန့်, ထိတ်လန့်, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အုပ်စုနှင့်ဆက်စပ်အရာအားလုံး။
PPSSPP ၏နိုင်ငံတော် (DM GAM OF OFC)
အလှူငွေထည့်ဝင်သူများနှင့်သာလျှင်လူများသည် PPSSPP EMULATOR (အန်ဒရွိုက်နှင့် PC ဂိမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံး) ကြောင်ကလေးများအုပ်စုတစ်စုတော့မဟုတ်ပါ။
★彡 THE UwU GANG ★
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 1) * မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုမဆို 2) * အနှောင့်အယှက်မပေးပါနဲ့ဒါကြောင့် fuck ဆိုတဲ့မ 3) * ဒါဟာမိတ်ဆွေများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ 4) ...
Clan / အမျိုးသမီး TEAM
စုဆောင်းသောမိန်းကလေးများတောင်အမေရိကဒေသ ၁၄ နှစ်အထက်ကစားသမားများ၊ ကစားသမားများ vs ကစားခြင်းများ
လူတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့လူမှုရေးမသန်စွမ်းမှုအုပ်စုတစ်စုပဲ၊ ဒါကစတစ်ကာများလို့ပြောပေမယ့် ...
ieBilie Eilish 🕷️💚🥑
bill Billie eilish ကိုကြည်ညိုလေးစားရန်ဖန်တီးထားသော💚အုပ်စုသည်ခွင့်ပြုထားသည် - Pass wallpapers💚 Pass …
clairvoyance, Tarot နှင့် esotericism အကြောင်းကို chat ဖို့အုပ်စု။ ပညာရေးနှင့်လေးစားမှုစည်းမျဉ်းများ
ANS လွှဲပြောင်းမှုများ✅သတင်းအချက်အလက်များ O ပန်းတိုင်များ✅စပိန်ပြိုင်ပွဲများ✅လိဂ်✅စမတ်ဘဏ်ခွဲလိဂ်✅ဒုတိယ…
စပိန်နိုင်ငံရှိ Harry Potter
UMLUMOS MAXIMA good အလွန်ကောင်းသောဝိဇ္ဖာများနှင့်စုန်းမများ၊ သင်လုပ်နိုင်သော Harry Potter အဖွဲ့အသစ်ကိုကြိုဆိုပါသည်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၂၂ နှစ်ထိကျွန်ုပ်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့သို့ဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ၃
HD ရုပ်ရှင်, စီးရီးနှင့် Anime
*[အီးမေးလျ protected]: ♻ Club de Animes Y Pelí .. 🎥🎞 * * GROUP RULES: * * new အသင်းဝင်အသစ်များအားလုံးသည်အဖွဲ့လိုက်ပါ ၀ င်သည်။ * …
အာဂျင်တီးနားမှ ၂၂ နှစ်အထိမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်အုပ်စုလိုက်။ စကားပြောရန်၊ လူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ မျှဝေရန်၊
အကာအရံ (secso Simulator)
ငါ၏အ mame uwu အုပ်စုတွင်လေးနက်စွာပူးပေါင်းပါ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးသွားသောအဖွဲ့ ၀ င်များဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ရုံလာနှင့်ထွက်ဆွဲထား။ အနည်းဆုံးဒီ shit xD ကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်
အမည်၊ အသက်၊ နိုင်ငံနှင့်ဓာတ်ပုံ (ဖြင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပါ) ဖြင့်ပြပါ။
Hans CA ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
ချစ်ကြည်ရေးနှင့်ကောင်းသော Vibe, အဘယ်သူမျှမ xxx ကျေးဇူးပြုပြီးပျော်မွေ့!
DJ ။ BIK3R MIX
သင်၏အကောင်းဆုံးသီချင်းများကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်ပါ၊ သို့မှသာအကောင်းဆုံးသီချင်းများခံစားနိုင်ပြီးမျှဝေနိုင်ပါသည်။
otakus \_ anime စီးရီး
Buenooooooooo, anime စီးရီး, anime memes ဒီမှာမျှဝေ ... anime နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးသည် ...
အွန်လိုင်း G53Gta
ဒဏ္Clာရီ Clan 🔥
အခမဲ့ NETFLIX HBO စာရင်းများ🙂
NETFLIX HBO DIRECTVGO ပုံနှိပ်ခြင်းများသည်အခမဲ့နှင့်အခြား PREMIUM GAMES နှင့် APPS များကိုလုံး ၀ စာရင်းရှင်းသည်။
မှော်အတတ်သိပ္ပံ၊ အခြားအသင်းဝင်များနှင့်စကားပြောပါ ...
ien ချစ်ကြည်ရေး၊ 🤝🏻Fun, 🎉
သူငယ်ချင်းများ၊ ပျော်စရာများ၊ တေးဂီတမျိုးစုံ၊ Apk များ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂိမ်းများ၊ စာအုပ်များ၊ မှတ်စုတိုများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊
သံသယဖြစ်ဖွယ် Vidllamds Gnt Seria pack ကိုရောင်းသည်
ငါဗွီဒီယိုအစီအစဉ်များကိုပူပြင်းစွာခေါ်ဆိုမှုများနှင့် paypal oxo နှင့်အခြားများစွာရောင်းချသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp တွင်လိင်တူချစ်သူများအဖွဲ့ဖြစ်သည်၊ နိုင်ငံအားလုံးမှလူများကိုလက်ခံသည်။ အကြောင်းအရာ + ၁၈၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖတ်ပါ Tiktok သို့မဟုတ် Tiktoker ၏အကြောင်းအရာများသာဗီဒီယို၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံများ၊ တေးဂီတ၊
Mr. Boomer နှင့်BrazuTaser😎🏅အရအကောင်းဆုံး shitpost အဖွဲ့•အသစ်များအတွက် pitusas, manaos နှင့်…
Anime Forum / l / Kawaii အသိုင်းအ ၀ ိုင်း: ၃
Foro Anime ဟာသူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်၊ ဒီနေရာမှာ animes ၏ပံ့ပိုးမှုများကို ...
မှော်အတတ်သိပ္ပံ၊ အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ် ပညာရေး…
အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ - spam မရှိပါ
Quarantine သက်ရောက်မှုသည်အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသင်မြင်လိမ့်မည်။ (မချိတ်ဆက်ပါနှင့်)
လာပါ! ဟုတ်ကဲ့ vossss, သေးသေးလေး၏အပိုင်းအစပျော်စရာပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
အုပ်စုစည်းကမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံ၊ နိုင်ငံ၊ အသက်နှင့်မပါ ၀ င်ပါ (စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရရန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု: '(…
kpop, kdramas အကြောင်းပြောဆိုရန်ထည့်သွင်းရန် ...
Kpop, jpop နှင့် anime
ℝℓє¢тє∂█▬██▀█▀◤OℝigiŇałသည်ဖန်တီးထားသည့် Legion ဖြစ်သည်။ Charlie Rojas၊ သင်လိုချင်သည့်တက်ကြွသောလူများကိုသင်လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ပိုင်အသိပညာ Gnosis 2
အမှန်တရားရှာဖွေရေးအတွက်။ Lucid ၏အိပ်မက်များ၊
အချို့က kpop ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်။ အခြားသူများကမူ Anime ကိုမုန်းလိမ့်မည်။
WhatsApp ၏ဝိညာဉ်ရေးအုပ်စု၊ အဆက်အသွယ်မရှိဘဲ၊ အယူဝါဒမပါဘဲ ...
နိုင်ငံတကာဘောလုံး Whatsapp အုပ်စု
စာပေ WhatsApp Group မှ
ပထဝီနိုင်ငံရေးသတင်းများ (စစ်ရေးပflိပက္ခများ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ... )
Whatsapp ၏ပထဝီနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွင်စစ်ရေးပconflictsိပက္ခများ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊
လူတိုင်းစကားပြော ... အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ, Bitcoins, Cryptocurrencies, ကုန်သွယ်ရေး, Forex, ...
ဤအုပ်စုတွင်ခွင့်ပြုထားသောအရာအားလုံးသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသော gore နှင့် / သို့မဟုတ် spam များမှအပ spam များသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။